Vaovao - Inona no maha samy hafa ny ranomainty miorina amin'ny rano sy ny ranomainty miorina amin'ny menaka ho an'ny milina sary?
Mpanonta solvent Eco
Fanontana UV fisaka
Masinina fanontana saina
Masinina fanaovana amboradara ampiasaina ao an-trano
Masinina amboradara loha 1
Masinina amboradara 2 loha
Masinina amboradara 4 loha
Masinina amboradara 6 loha
Plotter fanapahana birao
J-fanapahana mpanao teti-dratsy
Plotter fanapahana contour
Masinina fanaovana gazety fanaovan-tsindry hafanana indroa
Masinina fanindronana hafanana
Masinina fanaovan-gazety 5 amin'ny 1
Masinina fanontana hafanana miisa 8 amin'ny 1
Milina fanontam-pirinty 4 miloko sy milina 4
Milina fanontam-pirinty efijery 4 sy 4 gara vernier
Masinina laminasy mafana sy mangatsiaka
Masinina laminaty kely
Masinina laminasy YH360
Masinina laminasy YH460
Masinina laminasy YH650
Masinina laminaty mafana
Milina fanamainana sy fanapahana mangatsiaka
CO2 Mpanamboatra laser sy mpanapaka
Mpanamboatra laser ary mpanapaka
Milina karatra sy fanomezana
Masinina foil mafana fisaka
Mpanonta karatra PVC
Masinina manaingoana karatra
Masinina fanaovana boky boky
Masinina fanaovana Album
Inona no mahasamihafa ny ranomainty miorina amin'ny rano sy ny ranomainty miorina amin'ny menaka ho an'ny masinin-tsary?
Ny ranomainty miorina amin'ny solika dia ny fanalefahana ny loko amin'ny solika, toy ny menaka mineraly, menaka legioma, sns. Ny ranomainty dia miraikitra amin'ny mpanelanelana amin'ny alàlan'ny fidiran'ny solika sy ny etona amin'ny mpanonta fanontana; Ny ranomainty miorina amin'ny rano dia mampiasa rano ho mpanelanelana amin'ny fanaparitahana, ary ny ranomainty dia eo amin'ny mpanonta fanontana Ny pigmentera dia miraikitra amin'ny mpanelanelana amin'ny alàlan'ny fidiran'ny rano sy ny etona.
Ny inks amin'ny indostrian'ny sary dia miavaka araka ny fampiasana azy. Izy ireo dia azo zaraina ho karazany roa: Ny iray dia ny inks miorina amin'ny rano, izay mampiasa solvents azo avela amin'ny rano sy ny rano no singa fototra hamongorana ny fototry ny loko. Ny iray hafa dia ranomainty miorina amin'ny solika, izay mampiasa solvents tsy voavahan'ny rano ho singa lehibe handravana ny fototry ny loko. Araka ny solubility solvents dia azo zaraina ho karazany telo koa izy ireo. Voalohany, ny fidirana miorina amin'ny loko, izay miorina amin'ny loko, dia ampiasain'ny ankamaroan'ny milina fanaovana sary anaty trano; faharoa, inks mifototra amin'ny pigment, izay miorina amin'ny inks miorina amin'ny pigmen, dia ampiasaina amin'ny mpanonta inkjet ivelany. Fahatelo, ranomainty-solvent ranomainty, eo anelanelany, dia ampiasaina amin'ny milina fanaovana sary ivelany. Tokony hojerena manokana ireo karazana inks telo ireo, tsy azo afangaro. Ny masinina miorina amin'ny rano dia tsy mampiasa afa-tsy inks miorina amin'ny rano, ary ny masinin-tsolika kosa dia tsy afaka mampiasa inks solvent malemy sy inks solvent. Satria samy hafa ny «cartridges», ny fantsona ary ny «nozzles» miorina amin'ny rano sy ny menaka miorina amin'ny menaka rehefa apetraka ilay milina, Noho izany dia tsy azo ampiasaina tsy am-piheverana ilay ranomainty.
Misy antony dimy lehibe manimba ny kalitaon'ny ranomainty: ny fanaparitahana, ny fitondran-tena, ny sandan'ny PH, ny fihenjanana ambony, ary ny viscosity.
1) Miparitaka: mpandraharaha mavitrika ambonimbony izy io, ny asany dia ny manatsara ny toetoetran'ny tontolon'ny ranomainty, ary manatsara ny fifandraisana sy ny fahamendrehana an'ny ranomainty sy ny spaonjy. Noho izany, ny ranomainty notehirizina sy namboarina tamin'ny spaonjy dia misy mpanaparitaka amin'ny ankapobeny.
2) Fitondra-tena: Ity sanda ity dia ampiasaina hanehoana ny haavon'ny atin'ny sira. Ho an'ny inks tsara kalitao kokoa, ny atin'ny sira dia tsy tokony hihoatra ny 0,5% hisorohana ny fiforonan'ny kristaly ao amin'ny noza. Ny ranomainty miorina amin'ny solika dia manapa-kevitra hoe iza no novetaina ampiasaina araka ny haben'ny sombin-kazo. Ireo mpanonta inkjet lehibe 15pl, 35pl, sns. Dia mamaritra ny fahamarinan'ny mpanonta inkjet arakaraka ny haben'ny sombiny. Tena zava-dehibe izany.
3) PH sanda: ilazana ny sanda pH ny ranoka. Arakaraka ny maha-asidra ny vahaolana no mampihena ny sandan'ny PH. Mifanohitra amin'izany, arakaraka ny ahazoan'ny alkaline ny vahaolana no avo kokoa ny sandan'ny PH. Mba hisorohana ny ranomainty tsy manimba ny nozatra dia tokony ho eo anelanelan'ny 7-12 ny soatoavina PH.
4) Fihenjanana anaty: mety hisy vokany eo amin'ny ranomainty izany. Ny ranomainty tsara kalitao dia manana viscosity ambany sy fihenjanana ambony.
5) Viscosity: fanoherana ny ranoka ny mikoriana. Raha lehibe loatra ny viscosity an'ny ranomainty dia hanelingelina ny famatin'ny ranomainty mandritra ny fanontana izany; raha kely loatra ny viscosity dia hikoriana ny lohan'ny ranomainty mandritra ny fanontana. Ny rongony dia azo tehirizina mandritra ny 3-6 volana amin'ny mari-pana amin'ny efitrano mahazatra. Raha lava loatra ilay izy na hiteraka rotsakorana, dia hisy fiantraikany amin'ny fampiasana na ny fametahana azy. Ny fitehirizana ranomainty dia tsy maintsy hasiana tombo-kase hisorohana ny tara-pahazavana mivantana. Ny mari-pana dia tsy tokony ho avo loatra na ambany loatra.
Ny orinasanay dia manondrana inks anatiny sy ivelany be dia be, toy ny ranomainty solvent eco, ink solvent, ink sublimation, ink pigment ary manana trano fanatobiana entana mihoatra ny 50 any ivelany any ivelany. Azonay omena anao ny zavatra azo ampiasaina amin'ny fotoana rehetra, hiantohana ny asa tsy tapaka. Mifandraisa aminay mba hahazoana ny vidin'ny ranomainty eo an-toerana.
Fotoana fandefasana: Dec-15-2020
Lalam-panjakana No.8, Baimibu Xiushui Industrial Park, làlam-panjakana 106, Renhe Town, Distrikan'i Baiyun, Guangzhou, Sina.